TeveraUpThen: Yemahara uye Nyore Email Zviyeuchidzo | Martech Zone
Chitatu, Kurume 25, 2015 Muvhuro, April 25, 2016 Douglas Karr
Ini ndoda kugovana mamwe ekugadzira maturusi andinoshandisa kubata kwakawanda kupinda kweemail. Gore rapfuura, ndakakurudzira (uye ndichiri kushandisa) Evercontact iyo inoongorora masiginecha emaimeri kuti ivandudze ruzivo rwekuonana. Anenge makore maviri apfuura, ini yakagovaniswa Unroll.me - yakakura sisitimu ini yandinoshandisa inounganidza uye inosanganisa maemail mune imwechete email kudzikisira ruzha.
Nhasi, ndiri kugovera TeveraUp. Heino muenzaniso wakanaka wekuti ndinoshandisa sei. Tiri kushanda netarisiro kana mutengi uye ivo vanonditumira email uye kundizivisa kuti vangade kubatana neni asi ivo vachange vari kunze kweguta kana vari kupedzisa chirongwa. Vanobvunza kana ndichigona kubata base mumavhiki mashoma.
Hapana dambudziko, ndinotumira email ku 2weeks@followupthen.com. TeveraUp ipapo inoronga iyo email kuti idzoke kwandiri mavhiki maviri gare gare. Hapana marongero ekumisikidza pakarenda yangu kana kuwedzera rimwe basa pane yangu runyorwa runyorwa ... masekondi maviri chete kutumira email.
TeveraUp kunyange zvinoita kuti zvive nyore nekupindura kunyoresa kwako kwekutanga nePinduri kune Ese email iyo inowedzera iwo akajairwa maemail aunenge uchishandisa. Nenzira iyi ivo vanowoneka mune yako autocomplete mune yako email mutengi!
Kutanga kushandisa TeveraUp, ingonyora email uye sanganisira [chero nguva] @ followupthen.com muCC, BCC kana TO minda yeemail yako.
Imwe neimwe nzira yakati siyanei:
Bcc Iwe unogashira yekutevera maererano neemail, asi FollowUpThen haizotumire email iye wekutanga wekugamuchira.
TO Inotumira email kuhupenyu hwako hweramangwana.
CC Zvirongwa chiyeuchidzo chako nemupi.
Iwe unogona zvakare kupinda kune yavo saiti uye uone ako akamirira zviyeuchidzo! Kana iwe uchida kusangana kwekendari, zviyeuchidzo zveSMS, kuona mhinduro kana kuda kuseta timu, TeveraUp inopa mamwe anodhura upsell mapakeji.
Tags: email zviyeuchidzoemail zvishandisotevera ipapo
Apr 1, 2015 pa 9: 48 AM
Ini ndinoishandisa nenzira imwechete uye ndinofunga yakanaka. Mhinduro yakareruka yakadaro kudambudziko rinodzokororwa